Kunyora Kubata Zvemukati Zvinoshandura zvebhizinesi | Martech Zone
Chishanu, Mbudzi 8, 2019 Chishanu, Mbudzi 8, 2019 Douglas Karr
Ini ndinogara ndichishamisika pandinoverenga chinyorwa chinoshamisa pane bhizinesi reumwe webhusaiti kana blog, asi ipapo handina ruzivo rwekuti ndivanaani, nei ndichida kushanda navo, wavanoshumira, kana zvavanotarisira kuti ndiite zvinotevera pane saiti. Sezvo iwe investa
Zvemukati zvakaitwa mushe zvinoda kukosha kwakakosha mukutsvaga, chinyorwa dhizaini, mifananidzo, uye kunyange kusimudzira. Kana ndikamira pane chinyorwa chako chinovaka kuvimba uye chiremera neni pane imwe nyaya yandiri kutsvaga ... urikundibatsira here kuti ndinzwisise matanho anotevera ekuita newe kana kambani yako?
Iwe unogona kunge watoona kare rant yangu vhidhiyo pakubatanidzwa, saka unoziva manzwiro andinoita nezvekuti mazwi iwayo akakandwa sei zvakasununguka. Handisi kureva kuti chidimbu chega chega chemukati chawakaburitsa chinofanirwa kuve chinoteedzera pasi kusvika kuchinjiso metric, kunyange izvo zvingave zvakanaka. Asi… kana iwe uri kuyedza kutungamira muverengi kuburikidza nekutsvagisa kwako uine bhizinesi chinangwa mupfungwa… usakanganwa kunyatsoisa zviwanikwa zvinodiwa, kufamba, kana kufona-kuzviita kuvabatsira kuti vanzwisise matanho anotevera ari vanogona kutora!
Kiyi yekuburitsa zvemukati kuziva chinangwa chayo. Kana iwe uri kutsikisa zvemukati kungo chengeta yako blog ichitaridzika ichishanda uye uchifambirana neyakawandisa, iwe urikunzwisisa iyo pfungwa yezvose. Iwe unofanirwa kunge uchigadzira zvemukati nechinangwa chekuzadzikisa zvinangwa panguva yekuvandudza maitiro.
Mune ino infographic kubva kune Spiralytics, Zvemukati-Zvinotungamirwa Zvemukati: Maitiro Ekugadzira Zvemukati zveZvibatanidza, Engagements, kana Shanduko, ivo vanopa maitiro akareruka ekuona kuti zvemukati zvinokwanisa kuendesa pane yaro mari. Kuparara kwezvinangwa kuri nyore uye nehunyanzvi:
Zvemukati zveKubatanidzwa - Zvemukati ndizvo zvinotyaira vanhu kuwebsite yako. Asi nekugadzirwa kwakawanda kwemukati mewebhu uye Google inogara ichichinja algorithm, zvemukati zvemhando uye kukosha zvichagara zviri pamberi pekutanga. Kana zvemukati zvako zvakanaka, zvinofanirwa kunge zvichitora. Uye kana iri kuita, tarisira kuti traffic iwedzere.
Zvemukati zveZvibatanidza - Injini dzekutsvaga dzinoshandisa zvinongedzo sechiratidzo chekuvimba mualgorithm yavo nekuti vanhu vanowanzo batanidza zvakanyanya kuzviremera zvakavimbika pamhepo, izvo zvakare zvinobatsira kukanganisa masosi ekutsvaga. Mvumo nzvimbo dzinowanzo kuve nevateereri vakakura uye kuoneka, zvichiita kuti zvive nyore kuwana zvinongedzo. Saizvozvo, 21 muzana yeiyo Google chinzvimbo chealgorithm zvinoenderana nekubatanidza masimba maficha kana huwandu hwehukama kune duraini.
Zvemukati zveKutendeuka - Yako yekupedzisira chinangwa sebhizinesi kushandura tarisiro yako mukushandurwa kunobatsira, saka zvemukati zvinofanirwa kufambisa vateereri uye kuvaita kuti vatore matanho. Izvi zvinoshandura vashanyi vako kuve zvinotungamira, zvinotungamira kuva vatengi, uye vatengi kuva vamiriri vechiratidzo.
Tarisa uone izere infographic pano, uye uve shuwa kubaya uye verenga chinyorwa chaJim muchizere kuti uwane rumwe ruzivo rwakakura!
Tags: kudana kuzviitoContent Marketing